१० वर्षे प्रेमीले १३ वर्षीया प्रेमिकालाई बनाए गर्भ’वती (भिडियाेसहित)
१३ वर्षीया किशोरीलाई १० वर्षे प्रेमीले गर्भ’वती बनाएको खबर सार्वजनिक भएको छ । विज्ञले १० बर्षिया किशोर दार्याले कसैलाई ग’र्भव’ती बनाउन उनी निकै कम उमेर भएको भन्दै दा’बी ग’लत भएको बताएका छन् । १३ वर्षीया ती किशोरीले आफू इभानबाहेक अन्य कोहीसँग पनि इन्टिमेट नभएको दा’बी गरेकी छिन् । उनको कुरा मनोविद्ले विश्वास गरेका छन् ।
एन्ड्रोलोजी एक्सपर्ट डा. एभगेनी ग्रेकोभले भने,कुनै गल्ती नहोस् भन्दै हामीले प्रयोगशालाको नतिजा एक पटक होइन, दुई पटक पनि होइन, तीन पटक परीक्षण गरेका छौं,’ यूरोलोजी र एन्ड्रोलोजी एक्सपर्ट डा. एभगेनी ग्रेकोभले उक्त कार्यक्रममा भने । ‘त्यसमा शुक्रकिट थिएनन् । ऊ अझै बच्चै छ । उसको टेस्टोस्टेरोनसमेत छैन । यहाँ थप्नु पर्ने कुरा के छ भने उसको यौवन नै सुरु भएको छैन । त्यसकारण हामीसँग धेरै प्रश्न छन् ।’
ग्रेकोभको प्रमाणपछि पनि यी दुई र उनका अभिभावकले दार्याले भनेको ठिक हो भन्ने दा’बी गरिरहेका छन् । उनीहरुका अनुसार यी दुईले इभानको घरमा एक पटक यौ’न सम्ब’न्ध स्थापित गरेका थिए जसका कारण १३ वर्षे उनी ग*र्भवती भइन् । उनले १० वर्षे बालकले त्यस्तो गर्न नसक्लान् भन्ने सोचेको तर अहिले उनको त्यो सोचाई ग’लत भएको दार्याले बताएकी छिन् ।
‘त्यो उनैको आईडिया थियो, तर यसमा मलाई कुनै आपत्ति थिएन,’ दार्याले भनिन् । ‘१० वर्षमा कसैले यस्तो गर्न सक्ला भनेर मैले सोचेकी थिइन् । मैले त्यतिबेला केही पनि नहोला भनेर सोचेँ ।’
इभान आफैंलाई पनि प्रेमिकालाई गर्भ’वती बनाएको कुरामा विश्वास छैन । तर जब उनलाई उक्त बच्चा तिम्रो होइन त भनेर प्रश्न सोधियो तब उनले भने, ‘त्यस्तो हुन सक्दैन ।’
दार्या र इभान केही समयअघि रसियाली टिभी शो ‘अन एयर लाइभ’ मा आफ्नो विवादास्पद गर्भबारे जानकारी दिन, विज्ञमार्फत् परीक्षण गराउन उपस्थित भएका थिए । इभानले आफ्नी १३ वर्षीया प्रेमिकालाई गर्भ’वती बनाएको खबर गत हप्ता रसियाली सोसल मिडियामा प्रकाशित भएको थियो ।